Soosaarayaasha heerkulbeegga infrared | Warshadda & Shirkadaha Alaab-qeybiyeyaasha ah ee Shiinaha
Heerkulbeegga dadka qaangaarka ah, Heerkulbeegga Wejiga ee infraredka ee Dijital ah ee Dijitaalka ah oo ay la socoto Akhrinta Fahrenheit ee Ilmaha iyo Dadka Waaweyn
Badeecadani waxay ku habboon tahay cabbirka heerkulka ee dadka waaweyn, carruurta iyo dhallaanka. Waxaa lagula talinayaa dadka waaweyn inay ku shaqeeyaan heerkulbeegga infrared.
Heerkulbeegga Surezen infrared waa mid la qaadi karo oo leh kalsooni sare iyo saxnaan sare, taas oo si dhakhso leh u cabbiri karta heerkulka jidhka bini'aadamka ama heerkulka walxaha oo leh muuqaal LCD oo cad.
Qoriga heerkulka foodda (heerkulbeegga infrared) waxaa loogu talagalay in lagu cabiro heerkulka wejiga ee jidhka bini'aadamka waana mid aad u fudud oo ku habboon in la isticmaalo. Qiyaasta heerkulka saxda ah ee 1 ilbidhiqsi, ma laha barta laser-ka, iska ilaali waxyeelada indhaha, uma baahnid inaad taabato maqaarka aadanaha, iska ilaali infekshinka iskutallaabta, cabbirka heerkulka hal-guurka, oo iska hubi ifilada. Waxay ku habboon tahay isticmaaleyaasha guryaha, hudheelada, maktabadaha, shirkadaha waaweyn iyo hay'adaha, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa isbitaalada, iskuulada, caadooyinka, garoomada diyaaradaha iyo meelo kale oo dhameystiran, sidoo kale waxaa isticmaali kara shaqaalaha caafimaadka ee rugaha caafimaadka.
Heerkulka jirka ee caadiga ah ee jirka bini'aadamka wuxuu u dhexeeyaa 36 ～ 37 average celcelis ahaan). Haddii ay dhaafto 37.1 ℃, macnaheedu waa qandho, 37.3_38 ℃ macnaheedu waa qandho yar, iyo 38.1-40 ℃ macnaheedu waa qandho sare. Ka sarreeya 40 ° C, noloshu khatar ayey ku jirtaa waqti kasta.